ZITHATHELE Fouga Zephyr CM175 v1.1 FS2004 - Rikoooo
Usayizi 15.8 MB
Play 4 343
I Fouga Zephyr uvezwa ukucupha ezimbili:
- "Solo" ukumisa omunye umshayeli wendiza
- "Control ombaxambili" ukumisa, ie nabashayeli bezindiza ababili on ebhodini, Lokhu model okuzoqondiswa esihlalweni ezingemuva
umehluko eziningi phakathi indiza yangempela futhi lezi models kwangena
ukwenza ukusetshenziswa kulula ngoba umshayeli virtual:
- The gearwheel ikhala steerable kanti Fouga real waqhutshelwa emhlabathini nge amabhuleki
- GPS, a vor / DME kanye umshayeli othomathikhi yethulwe zombili onobuhle
Hhayi njengoba odumile njengoba "grand-mzalwane" wakhe, indiza Fouga Magister, lo Fouga Zephyr iyona nguqulo lezindiza ye Fouga.
Ekuqaleni le zamashumi ayisihlanu, Navy abaphathi French, esesha indlela kazwelonke ukuqeqesha abashayeli bezindiza yabo, babengeve benesithakazelo hlelo Fouga kuyaqhubeka French Air Force. An version aguqulelwe Navy ezibekiweko lakhiwa futhi on 1956 July 31, lo Fouga CM170M sibonelo sokuqala, esasibizwa ngokuthi "Esquif", wenza flight walo wokuqala. A ukuthengwa 30 aircrafts watshelwa kanye kwezidingo kwaba esilinganayo phakathi 1959 kanye 1961. Lokhu kwaba ukuhlaselwa ukuthengwa oda ekule nguqulo izindiza, kamuva eyethiwa ngokuthi CM175 "Zephyr" ngokuhambisana nezinye French Navy aircrafts ngalesi sikhathi (Aquilon, Alize) usebenzisa amagama imimoya '. Ngaphezu kwalokho i-Fouga Zephyr eyayisetshenziswa Navy French, ikakhulukazi ne Foch kanye Clemenceau abathwali. Phakathi neminyaka engaphezu kuka amathathu, lo Zephyr luye lwabonisa nokwethenjelwa ukuqina yayo izimfanelo ngaphansi kwezimo ezinzima ukusetshenziswa
Iqembu yasemoyeni ezindizayo Zephyrwas wadala in 1961 by the French Navy
Njengoba ebonakala kakhulu elifana indiza Fouga Magister, lo Zephyr Nokho libhekene kugucuka ezibalulekile. ngokuyisisekelo:
(5ource: imibhalo English kufakwe the thwebula)
panel 2D futhi Izikali: Jean-Pierre Langer
Umeluleki Technical: Claude Marie (a zangaphambili Fouga Zephyr instructor pilot)
Northrop B-2A uMoya AlphaSim FS2004